नयाँ नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, १८ जेठ २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी नयाँ नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, १८ जेठ २०७५)
on: June 01, 2018 लगानी
नयाँ नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, १८ जेठ २०७५)
कम्पनीले चालू आव २०७४/७५ को तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार रू.२ लाख ३६ हजार नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ९६ प्रतिशतले कमी हो । कम्पनीले अघिल्लो आवको तेस्रो त्रैमासमा रू.६१ लाख १० हजार नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको ब्याज खर्च र कर्मचारी खर्च बढेकाले नाफा घटेको हो । सोही अवधिमा कम्पनीको चुक्तापूँजी २० प्रतिशतले बढेर रू.२ करोड ४० लाख पुगेको छ भने रिजर्भ कोषमा रू. १ करोड ५२ लाख छुट्याएको छ । कम्पनीले तेस्रो त्रैमासमा रू. ९ लाख ५६ हजार खराब कर्जा उठाएको छ । साथै कम्पनीले पूँजी वृद्धिका लागि १ बराबर २ दशमलव ५ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्नका लागि २०७४ चैत १९ मा सेबोनमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले रू. १ सय अङ्कित दरको ६ लाख कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्न निवेदन दिएको हो । विक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा ३० दशमलव ५५ प्रतिशतबाट घटेर ० दशमलव ९८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कम्पनीको लगानी रू.१० हजार रहेको छ । चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू.६ करोड ७६ लाख निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने रू. ३० करोड ४२ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी रू.१ करोड २६ लाख, कर्मचारी खर्च रू.१ करोड ३ लाख, अन्य सञ्चालन खर्च रू.५५ लाख ६ हजार र सञ्चालन नाफा रू.५ लाख ६९ हजार ऋणात्मक रहेको छ । स्थिर सम्पत्ति ६५ प्रतिशतले बढेर रू.५२ लाख १३ हजार पुगेको छ भने अन्य सम्पत्ति १९ प्रतिशतले घटेर रू.१ करोड २ लाखमा सीमित भएको छ ।
कम्पनीले सम्भावित जोखीमबापतको व्यवस्थामा रू.२१ लाख १ हजार छुट्याएको छ भने निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ । पूँजीकोष लागत १० दशमलव २५ प्रतिशत र पूँजीकोष पर्याप्तता १२ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार तरलता अनुपात ८ दशमलव ०२ प्रतिशत, प्रतिशेयर आम्दानी (वार्षिक) रू.१ दशमलव ३१ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू.१ सय ६३ दशमलव ७५ रहेको छ । बिहीवारको शेयर मूल्य नेटवर्थको २ गुणा छ ।
मैनबत्ती विश्लेषण : कम्पनीकोे ५८ दिनको कारोबारमा अन्तिम दिनमा कालो मारुबोजु आकृति भएको मैनबत्ती बनेको छ । यसले शेयर मूल्य घट्ने सङ्केत गर्दछ ।
आरएसआई : कम्पनीकोे ५८ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्युट्रल जोन (४८ दशमलव शून्य ३ स्केल) मा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : कम्पनीको ५८ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन ५० दशमलव ७१ विन्दुमा छ । उतारचढाव मध्यम रहेको छ ।
मुभिङ एभरेज : कम्पनीको ५८ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्य रेखा र १४ दिने औसत मूल्य रेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने औसत मूल्य रेखा र २६ दिने मूल्य रेखाभन्दा तल छ । हालको मूल्य रू. २ हजार ८१ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू.२ हजार १ सय ७७ मा प्रतिरोध र मूल्य सस्तिएमा रू. २ हजार ९० मा टेवा पाउने देखिन्छ ।